Muuqaal: Xildhibaanada Soomaliland “Dr. Cali Ciise Hargeysa ha yimaado, Waxkasta wuu naga Helayaa” (Daawo) | KALSHAALE
Muuqaal: Xildhibaanada Soomaliland “Dr. Cali Ciise Hargeysa ha yimaado, Waxkasta wuu naga Helayaa” (Daawo)
Jan 9, 2019 - 7 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Qaar kamid ah Xildhibaanada Somaliland ayaa ka hadlay Doorashadii maalintii shalay ka dhacday magaalada Garoowe ee lagu doortay Madaxwaynaha Puntland, Iyagoo xusay inay soo dhowaynayaan inay Wada shaqayn yeeshaan Maamulka Cusub.
Xildhibaan Nac-nac ayaa sidoo kale sheegay in Beesha Maxamuud Saleebaan oo ay ku Xukunta Puntland ka dhigtay Qori-isku dhiib, Wuxuuna Fariin u diray Dr. Cali Ciise isagoo sheegay in Hadii uu Hargeisa yimaado uu Helayo Codadka uu doono, Sida uu hadalka u dhigay.
Maamulkii C.wali Gaas ayaa Xiisad kala dhaxaysay Maamulka Muuse Biixi, Waxaana dad badan isha ku eegayaan Sida ay isku Wajahaan Xukuumadda Cusub ee Puntland.
War odayga maxaa kakhaldan maxaa harti daba dhigay puntland laascaano dhulbahante majeerteen buu shaqo kadhigtay Aduunka nin baryo iyo amaan yo cay isku dhexwada. Waxay layaabeen doorashada say u dhacday. Xarago. Iyo jegaanta waa lagu shubtay nin baa habeen imo ku shubtay madaxweynaha ciro noqonlahaa. Waa lagaga shubtay. Puntland sanduuq baa lagu guraadin doorashada
Wa r nimankaas idoir yaa harti ka reeba mar amaan cay kibir macnaha amaan hadaad aragto way kajajabantahsy. Hada cay aragto waa kibir xoogaa lacaga kahelay.
Waxaan doonayaa inaan si kooban uga hadlo meelkadhacyada xubnaha dawladda jam somland ku jiraa ku dhaqmaan? Waa gef siyaasadeed in somaliya goboladeeda la hanbalyeeyo waa faro gelin qaawan iyo fudayd siyaasadeed oo ay ku dhaqmaan xubno baarlamaanka ka tirsan ama xubno xisbiyada qaranka ka tirsan? Xaq uma lihin somaliya oo lid iyo cadaw ku ah jiritaanka jam somland inaan hanbalyayno waa gafafka iyo habacsanaanta kala danbayn la’aaneed ee ka muuqada mas’ uuliyiinta iyo shacabka jam somland
Hadla oo caalamka ula hadla siday somaliya ulga hadasho nacaybka iyo cadaawadda ay u hayso jam somland labada wiil ee khayrlaawe iyo armaajo siday idiinla dhaqmaan si ka daran toban jeer jibaar ula dhaqma ? Markaasaad noqonaysaan umad iyo madax iyo shacab guulaysta? Adeer xumaan hayga qaadanina madaxda jam somland ma taqaano habka dawladnimo iyo sida layskaga celiyo somaliya? Ee waxaad taqaanaan sida loo dhaco ee loo cunno hantida dalka iyo ummadda jam somland? Adeer siday somaliya u dhaqanto ee cadaawadda ah u dhaqma iyosi ka daran ? Waydiista ingiriiska wixii aan kala saxeexanay ee qaramada midoobay yaala inuu ingiirku aduunka u ban dhigo? Somaliya ma oga in ingiriisku uu yahay kan aynu kala saxeexanay inaan xaq u leenahay hadaan nahay jam somland inaan heshiis ciidan iyo mid heshiish kabaniyo iyo mid saldhigyo aan wada galnay u sheega somaliya ? Adeer hurdada ka toosa iyo bariiska iyo cunada aad madaxtooyadan ku cuntaan maaha xukunku
Wararka ka imanaya Garoowe waxay sheegayaan in madaxtooyadii puntland ey la wareegeen koox ka socota maamulka Somaliland.
Waan soo dhoweynaynaa in maamul gobaleedyadu siday isugu dhowyihiin isugu darmadaan si buuqu u yaraado.
Odaygani waa cammoobey markaasuu puntlandi kuwaashay sidii feysal waraabe kulahaa qori isu dhiib hadaa mahargeysa maamulkeedaa cidkale qabataa doorka soo socda waxa leh habar yoonis waagii riyaale qabtayna cigaal baa uga dhintay allahaw naxariistee bal iminkaba haqabato cidaan sadexda habrood ahayni
WELIGEY QOFKAN QOF KA LIITA NOLOSHAYDA MAAN ARAG , DEE CIDQABATANA MA HAYSTO ISAGUNA WAABA NACNACLE NIN WEYN
NACNACOOW IDINKUBA SADDEXDA HABROOD MA CID AAN AHAYN BAA IDIN XUKUNTA GUNYAHAY ?NACNACLE .HARGEYSA IYO BURCO HAYDIN QAADEEN
IYADII BAA BARI GALBEED & HAWD UKALA FADHIDA MARKAASAY CIDKALE UYEERANAYSAA,WAA HABARTII XAAADA QAADI WEYDEY EE TIRI IIGU SOO DARA!!!.
WAR CALI KHALIIF & COMPANY-giisii KHATUMO AHAA MEEL KU SHEEGA DHEH.
ISIS MADE IN ISRAELI(SUICIDE PROJECT & ISRAELIAN MISSIONERY=ELLIOTE SHIMON GROUPS,fuck your self